मौसमका कारण आकाशमै यात्रु बेहोस
काठमाडौँ । मौसमका कारण धेरैबेरसम्म जहाज आकाशमै होल्ड भएपछि जहाजमा सवार एक यात्रु बेहोस भएका छन् । काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा ती यात्रु बेहोस भएका हुन् । काठमाडौँबाट बिहान ७ः४४ मा उडेको सो जहाज निर्धारित समयअनुसार ८ः४४ मा अवतरण गर्नुपर्ने थियो । तर नेपालगञ्जमा मौसम प्रतिकूल देखिएपछि …
बिहीबार सुनको मूल्य ह्वातै बढ्यो, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात बढेको छ । स्थानीय बजारमा अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् बुधबार रू. १०० ले बढेको सुनको भाउ बिहीबार रू. १ हजारले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९३ हजार ७०० मा कारोबार भएको छ । बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रत…
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउ…
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार ९९ नेपाली श्रमिक पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका छन् । बुधबार राति ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ नेपाली श्रमिक इजरायल प्रस्थान गरेका हुन् । इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधारमा उनीहरु रोजगारीका लागि इजरायल गए…
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मौलाकालिका मन्दिर जानका लागि केबुलकार निर्माण सुरु गरिएको छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर केबुलकार निर्माणका लागि कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको मौलाकाली केबुल…
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको विकृति, विसङ्गतिविरुद्ध गर्दै आएको आन्दोलन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जाखिमका कारण ‘भर्चुअल’ रूपमा गर्ने भएको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणका कारण आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको र यह…
निजी क्षेत्रका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुन्छन्ः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिइने बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार …
एमाले उपाध्यक्ष पौडेलद्वारा बुटवल उपमहानगरको नयाँ भवन उद्घाटन
लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवनको आज उद्घाटन भएको छ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भर्चुअल माध्यमबाट आज उद्घाटन गर्नुभयो । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा भर्चुअलबाट सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधान पौडेलले विकासका मुद्दामा कसैले पनि राजनीति नगर्न आग्रह गर्न…
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अवैधरूपमा बेचबिखनको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सरकारले निःशुल्क लगाइरहेकाले अवैधरूपमा बेचबिखन गरेको पाइएका कारबाही गर्ने जनाउनुभयो । …
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुन नसक्दा भीडभाड बढेको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना दैनिक बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, मास्क अनिवार्य गर्न र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न निर्देश…